Jilli Adda Bilisumaa Oromoo (ABO) Finfinnee seene. - NuuralHudaa
Jilli Adda Bilisumaa Oromoo (ABO) Finfinnee seene.
On Aug 14, 2018 29
Torbee darbe jilli mootummaa Ityoophiyaa prezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi ministeera haajaa alaatiin durfamu gara Eertiraa imaluun, hooggantoota ABO waliin mari’atanii walii galtee nagayaa mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Kanuma hordofuun jilli Addichi gara biyyaatti erge har’aa Finfinnee seenee jira.
Jilli Adda Bilisumaa Oromoo har’a Finfinnee seene kun dubbi himaa addichaa Obbo Toleeraa Adaabaatiin kan hoogganamu yoo tahu, yeroo buufata xayyaara Boolee gahetti qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaatiin Simannaan godhameefii jira.
ABO ShaneeMootummaa Naannoo Oromiyaa
May 18, 2022 sa;aa 6:11 am Update tahe